मात्र एक गिलास पानीले यसरी थाहापाउनुहोस् घरमा कस्तो र कुन शक्तिको प्रवेश ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/मात्र एक गिलास पानीले यसरी थाहापाउनुहोस् घरमा कस्तो र कुन शक्तिको प्रवेश !
मात्र एक गिलास पानीले यसरी थाहापाउनुहोस् घरमा कस्तो र कुन शक्तिको प्रवेश !
काठमाडौँ । हाम्रो घर एक समग्र ठाउँ हो, जहाँ हाम्रा धेरै जनाको भावना, विचारहरु तथा धेरै प्रकारका शक्तिहरुको भेट हुन्छ । परिवारका सदस्य, छिमेकी तथा घरमा आउने पाहुनाबाट विभिन्न भावना, विचार तथा नदेखिने शक्तिहरु एकपटक घरमा भित्रिएपछि, त्यसले हाम्रो आचरण र पुरै जीवनलाई निकै प्रभाव पार्छ । हाम्रो नांगो आँखाले आफ्नो घरभित्रको यस्ता सकारात्मक वा नकारात्मक शक्ति, विचार वा भावनाहरु देख्न सक्दैनौ, तर महशुस पक्कै गर्न सक्छौँ।
एक पारदर्शी सिसाको गिलासमा नुन र सेतो भिनेगर(अमिलो पदार्थ)को साथमा गिलासको १-३ भाग भरिने गरी सफा पानी पनि राख्नुहोस् । अब त्यस गिलासलाई तपाईलाई अशान्ति वा खराब महशुस हुने कोठामा राख्नुहोस् । तर, गिलास कसैले नदेखिने ठाउँमा एक दिनभरि यानी २४ घण्टा राख्नुपर्छ । कसैले थोरै मात्रै पनि हल्लाउन नसक्ने ठाउँमा राख्नुहोस् ।
२४ घण्टापछि उक्त गिलासलाई अवलोकन गर्नुहोस् । यदि तपाईले राख्नु भएको गिलास जस्तो छोड्नुभयो त्यस्तै अर्थात् सफा छ भने त्यसलाई अर्को कोठामा त्यसरी नै राख्नुहोस्, जहाँ तपाईलाई खराब महशुस हुन्छ । तर, यदि गिलासको पानीमा दाग वा पानीका फोकाहरु उठेका छन् भने सम्झनुहोस् त्यो कोठामा नकारात्मक शक्तिको प्रभाव बढी छ ।
यस प्रक्रियालाई दोहोर्याई रहुनुहोस्, जबसम्म राखेको सफा गिलास २४ घण्टासम्म सफा रहँदैन । यसरी हामी आफ्नो घरको नांगो आखाले देख्न नसकिने नकारात्मक शक्तिलाई हटाउन सक्छौ ।
डाइटिङको चक्करमा लाग्दा यि २३ वर्षे युवतीको भयो यस्तो हाल